टिभी र मोनिटर बायस प्रकाश भनेको के हो? - MediaLight पूर्वाग्रह प्रकाश
टिभी र मोनिटर बायस प्रकाश भनेको के हो?
पूर्वाग्रह प्रकाश एक रोशनीको स्रोत हो जुन तपाईंको प्रदर्शनको पछाडिबाट निस्कन्छ, तपाईंको टिभी वा मनिटरको प्रदर्शन प्रदर्शनमा सुधार गर्दछ, तपाईंको आँखाको लागि एक सुसंगत सन्दर्भ प्रदान गरेर। (म नयाँ र coloredको एलईडी बत्तीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन जुन तपाईंको बैठक कोठालाई डिस्कोमा बदल्छ)।
पूर्वाग्रह प्रकाश के गर्छ?
उचित पूर्वाग्रह प्रकाशले तपाईंको दृश्य वातावरणमा तीन प्रमुख सुधारहरू ल्याउँछ:
सर्वप्रथम, यसले आँखा तनाव कम गर्दछ। अँध्यारो वातावरणमा हेर्दा, तपाइँको प्रदर्शन एक कालो देखि एक धेरै उज्ज्वल दृश्य धेरै पटक एक कार्यक्रम वा चलचित्रको समयमा जान सक्छ। तपाईका आँखाहरुका विद्यार्थीहरु लाई कालो अन्धकारबाट यो चम्किलो बत्तीमा छिटो मिलाउन आवश्यक छ र, साँझको अवलोकनको क्रममा, तपाई महत्वपूर्ण आँखा थकान भोग्न सक्नुहुन्छ। पूर्वाग्रह प्रकाशले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंको आँखा जहिले पनि कोठामा एक प्रकाश स्रोत छ तपाईंको डिस्प्लेबाट विचलित नगरी, वा परावर्तन नगरी। यो एउटा कारण हो कि पूर्वाग्रह प्रकाश व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि OLED टेलिभिजनको लागि आवश्यकता हो, जुन चरम कालोहरू सक्षम छ, र कुनै पनि एचडीआर सेट, जुन उच्च प्रकाशको लागि सक्षम छ।
दोस्रो, पूर्वाग्रह प्रकाशले तपाईंको प्रदर्शनको कन्ट्रास्टमा सुधार गर्दछ। टेलिभिजन पछाडि हल्का सन्दर्भ प्रदान गरेर, तपाईंको प्रदर्शन कालोहरू तुलनामा कालो देखापर्छन्। तपाईले यो चित्र कसरी हेरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। बीचमा खैरो आयत वास्तवमा खैरो र ofको एक छाया हो, तर हामी यसको वरिपरिको क्षेत्रलाई हल्का पार्दै जाँदा, हाम्रो मस्तिष्कले यो गाढा भएको जस्तो महसुस गर्दछ।
अन्त्यमा, पूर्वाग्रह प्रकाशले तपाईंको दृश्य प्रणालीलाई अन-स्क्रीन र colors्गमा सन्तुलनको लागि सेतो पोइन्ट सन्दर्भ प्रदान गर्दछ। सिमुलेटेड डी 65 of सेतोको नजिकको र सब भन्दा सुसंगत प्रजनन प्रस्ताव गरेर, मिडियालाइट उच्च र color्गको तीक्ष्णता हासिल गर्न बजारमा सब भन्दा राम्रो उत्पादन हो।
मिडियालाइट उद्योगको अग्रणी कलरग्रेड of एउटा चिपकने पट्टीमा एलईडी बत्तीहरूको स is्ग्रह हो, जुन कुनै पनि अनुप्रयोगको लागि सरल र शक्तिशाली पूर्वाग्रह प्रकाश समाधान प्रदान गर्दछ। यो सजिलै मिनेट भित्र स्थापित हुन्छ र प्राय जसो केसमा तपाईको टेलिभिजनको यूएसबी पोर्ट मार्फत संचालित हुन्छ, यसको अर्थ मिडियालाइट तपाईको टेलिभिजनको साथ स्वचालित रूपमा अन र अफ हुन्छ। यसले मिडियालाइटलाई "सेट एन्ड विर्सन" स्थापना गर्दछ र जब तपाईले विचार गर्नुहुन्छ कि सबै मिडियालाइट पूर्वाग्रह प्रकाश पट्टिहरू पाँच बर्षे वारंटी द्वारा समर्थित छन्, यसको मतलब तिनीहरू सजिलै राम्रो मूल्य अपग्रेड हुन्छ तपाईले आफ्नो घर मनोरन्जन वातावरणमा गर्न सक्नुहुन्छ।
तर यो केवल होम थियेटर अनुप्रयोगहरूको लागि मात्र होईन - मिडियालाइट पेशेवर र color्ग ग्रेडिंग वातावरणमा पनि प्रयोग हुन्छ। वास्तवमा, मिडियालाइट परिवारले अब अनुकरण गरिएको D65 डेस्क बत्ती र बल्बहरू समावेश गर्दछ जुन सबै समान C C CRI र T 98 TLCI कलरग्रेड ™ Mk99 LED चिप मिडियालाइट स्ट्रिपको रूपमा छन्, र तीन बर्षे वारंटी द्वारा समर्थित छन्।
तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि OLED पूर्वाग्रह बत्तीबाट फाइदा गर्दैन, तर तपाइँ गलत हुनुहुनेछ। राम्रो कालो स्तर र OLED र माइक्रो एलईडी प्रदर्शन को अत्यधिक उच्च कन्ट्रास्ट अनुपात को कारण, आँखा तनाव एक ठूलो चिन्ता हो।
तपाई भन्छु कि आँखा तनाव अनुभव छैन? एक प्रदर्शन को कथित चमक वा अन्धकार अझै पनी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यसको विपरित अझै बढाइन्छ, प्रदर्शन क्षमताहरु लाई परवाह नगरी।
निम्न छविमा हामी कालो प्लस चिन्हको मध्यमा दुई सेता वर्गहरू प्रस्तुत गर्दछौं। कुन उज्यालो देखिन्छ?
ती दुबै समान हुन्, र दुबै तपाईंको प्रदर्शनको अधिकतम चमकबाट सीमित छन्।
जहाँसम्म, यदि तपाईंले भन्नुभयो कि बायाँमा सेतो वर्ग उज्यालो देखिन्छ, तपाईंले भर्खरै अनुभव गर्नुभयो जुन पूर्वाग्रह बत्तीहरूले कन्ट्रास्टलाई बढावा दिन्छ। धेरै व्यक्ति गल्तीले विश्वास गर्छन् कि पूर्वाग्रह बत्तीहरूले केवल छाया विवरणहरू सुधार गर्दछ। अब तपाईं तिनीहरूलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। बायस लाइटहरू को माध्यमबाट कथित भिन्नता बढाउँछन् सम्पूर्ण गतिशील दायरा - केवल छाया मात्र होइन!